အနီးကပ် - အနီအောက်ရောင်ခြည် Spectroscopy (2018) ကိုအသုံးပြု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်စဉ်အတွင်း Pre-Frontal Cortex နှင့်လိင်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများအတွက် Hemodynamic တုံ့ပြန်မှုတစ်ပြိုင်နက်စောင့်ကြည့် - သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ပေါ်
မှတ်ချက်များ။ ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းသည်သဘာဝကြည့်ရှုခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းထက်အာရုံကြောနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်ဟုဆိုကြသည်။ ဟုတ်ပါတယ်ဒီပြောဆိုချက်ဟာအနတ္တပါ။
Evgenii Kim ပါ, M.Sc, Sungchul Kim, M.Sc, Phillips က V. ဇေဖနိ, M.Sc, Songhyun Lee, Ph.D, Eloise Anguluan, M.Sc, Kwangsung ပန်းခြံ, MD, Ph.D, ဂျေဂွမ်ကင်မ်, Ph.D
ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကိုလိင်အင်္ဂါမှတုန့်ပြန်မှုနှင့်အတူလိင်မှုနှိုးဆွမှု၏အောက်ဖော်ပြပါယန္တရားများကိုနားလည်ရန်နှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုရှာဖွေရာတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်သည်။ လေ့လာမှုအတော်များများတွင် ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုသည်လိင်မှုနှိုးဆွမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည်ကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပြီးလေ့လာမှုအနည်းငယ်ကသာလျှင်တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့် penile တုန့်ပြန်မှုကိုတိုင်းတာသည်။
လိင်မှုနှိုးဆွမှုကာလအတွင်းလိင်အင်္ဂါတွင် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်သွေးကြောဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်ပြိုင်တည်းမှတ်တမ်းတင်ရန်အနီးအနားရှိအနီအောက်ရောင်ခြည်ရောင်စဉ်တန်း (NIRS) ကိုခရီးဆောင်လွယ်ကူစွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်သည့်တန်ဖိုးနည်းနည်းစနစ်တစ်ခုအဖြစ်မိတ်ဆက်ပေးရန်။
ကျန်းမာသောယောက်ျား ၁၅ ယောက်၏ဟိုင်ဒြိုနမ်မင်တိုင်းတာမှုများကိုအိမ်ဆောက် NIRS စနစ်ဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ကန ဦး စမ်းသပ်မှုတွင် pre-frontal cortex (N = 15) တွင်လိင်အင်္ဂါပြောင်းလဲခြင်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု (VSS) နှင့်ကြားနေအမြင်အာရုံကိုလှုံ့ဆော်ခြင်း (NVS) အတွင်းတိုင်းတာသည်။ နောက်ဆက်တွဲစမ်းသပ်မှုတွင် ဦး နှောက်နှင့် penile hemodynamics ကို VSS နှင့် NVS အတွင်း NIRS ကို အသုံးပြု၍ တစ်ပြိုင်နက်တည်းတိုင်းတာသည် (N = 10) ။
pre- တိုကျရိုကျ cortex VSS နှင့်ဆက်စပ်သောလှုပ်ရှားမှုပြ NVS မဟုတ်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းတိုင်းတာမှုများကကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သောအမျိုးသားများတွင်လိင်မှုနှိုးဆွမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်သွေးပမာဏတိုးပွားလာခြင်းကိုညွှန်ပြသည့် penile အောက်စီဂျင်နှင့် deoxygenated ဟေမိုဂလိုဘင်အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးမြှင့်မှုကိုပြသခဲ့သည်။ ဦး နှောက်နှင့်လိင်အင်္ဂါအကြားရှိ hemodynamic ပြောင်းလဲမှုများတွင် ၄ စက္ကန့်၏ပျမ်းမျှတုန့်ပြန်မှုနှောင့်နှေးခဲ့သည်။
ဤပဏာမလေ့လာမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်ဆက်စပ်သောနှောက်သွေးကြောဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ရုံသာမက penile hemodynamics ၏တစ်ပြိုင်နက်တည်းတိုင်းတာမှုကိုစစ်ဆေးနိုင်သည့် NIRS စနစ်ကိုတင်ပြခဲ့သည်။ NIRS စနစ်သည်လိင်ဆေးပညာနယ်ပယ်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အလားအလာရှိသောနည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီး Erectile Dysfunction ကိုထပ်မံတိုးချဲ့နိုင်သည်။
Kim E၊ Kim S၊ Zephaniah P ။ Near-Infrared Spectroscopy ကို အသုံးပြု၍ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိမ်နင်းမှုကာလအတွင်း Pre-Frontal Cortex နှင့်လိင်အင်္ဂါအင်္ဂါတို့တွင် Hemodynamic Response ၏တစ်ပြိုင်နက်တည်းစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်း။ Sex Med 2018; XX: XXX-XXX ။
အနီး - အနီအောက်ရောင်ခြည် Spectroscopy, Hemodynamics, အကြို Frontal Cortex, အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု, Erectile အလုပ်မဖြစ်
erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) ဟုလူသိများသောလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်လုံလောက်သောစိုက်ထူမှုမရရှိခြင်းသည်ဘဝ၏အရည်အသွေးအပေါ်သိသိသာသာဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းမှုများစွာသည်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းစသော ED များတွင်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ အလားတူပင်၎င်းသည်ဆီးချိုရောဂါ၊ နဗ်ကြောဖွဲ့ရောဂါများစွာသို့မဟုတ်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများအပါအ ၀ င်အလွန်လေးနက်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏အစောဆုံးသရုပ်ဖော်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ED ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အော်ဂဲနစ်ဇာစ်မြစ်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည်ဆရာ ၀ န်အတွက်အရေးကြီးသောအလုပ်ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုတွင်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုများစွာပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းတွင်အထီးအ ၀ တ်အထည်တွင်လိင်တံစိုက်ထူမှုသည်အရေးအကြီးဆုံးသောတုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။ လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကာလအတွင်းအာရုံကြောဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုရှိကြောင်းကိုလည်းပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည်နှိုးဆွမှုဖြစ်စဉ်တွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခန်းကဏ္indicateကိုညွှန်ပြနိုင်သည်။ ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုင်းတာခြင်းဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည့်အတွက်လေ့လာမှုမြောက်မြားစွာသည်လိင်စိတ်နိုးထစဉ်အတွင်း ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားသည်။ ဤလေ့လာမှုများမှရလဒ်များသည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအားနက်ရှိုင်းသော ဦး နှောက်နှင့်ပုံမှန်ကျန်းမာသောယောက်ျားများတွင် cortical ပုံစံများနှင့်ဆက်စပ်စေသည်1, 2,3လိင်စိတ်နိုးထမှုသည်ရှုပ်ထွေးသောအာရုံကြောဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်ဟူသောအချက်ကိုအကြံပြုသည်။ လေ့လာမှုအများစုသည် penile ပြန့်ပွားမှုကိုစစ်ဆေးရန် plethysmography, pneumatic cuff သို့မဟုတ် RigiScan (Timm Medical Technologies Inc, Eden Prairie, MN) နှင့်အတူ ဦး နှောက်၏တုန့်ပြန်မှုကိုလေ့လာရန် positron ထုတ်လွှတ်ခြင်း tomography (PET) သို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်သောသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) ကိုအသုံးပြုသည်။ နှင့်တင်းကျပ်။ လိင်မှုနှိုးဆွမှုတွင် ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုများကိုစောင့်ကြည့်ရန်အတွက် PET နှင့် fMRI သည်နည်းပညာကိုတည်ထောင်ထားသော်လည်း၎င်းတို့သည်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုများနှင့်စျေးကြီးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဤပုံစံများကိုအထူးသဖြင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုများစွာလွှမ်းမိုးနိုင်သည့်လက်တွေ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်စီမံရမည်။
ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့အနီး - အနီအောက်ရောင်ခြည် Spectroscopy (NIRS) ကိုအသုံးပြုပြီးနှောက်နှင့် penile hemodynamics ၏တစ်ပြိုင်နက်တည်းစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုကို enable လိမ့်မယ်တဲ့ system ကိုအသုံးချရန်အဆိုပြုထား။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော NIRS သည်သက်တောင့်သက်သာရှိပြီးသဘာဝကျသည့်နေရာတွင် hemodynamic response monitoring အတွက်ကောင်းစွာသင့်တော်သည်။ NIRS သည်အထူးသဖြင့် ဦး နှောက်သုတေသနအတွက်ဇီဝဆေးပညာနယ်ပယ်တွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသောနည်းပညာဖြစ်လာသည်။4 ထို့အပြင် NIRS သည် fMRI နှင့် PET နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မီလီစက္ကန့်ခန့်အထိပိုမိုမြင့်မားသောယာယီ resolution ကိုရရှိနိုင်သည်။5 ထိုကဲ့သို့သောမြင့်မားသောယာယီအင်္ဂါရပ်သည် ဦး နှောက်နှင့်လိင်အင်္ဂါ hemodynamic တုန့်ပြန်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ရာတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်နိုင်သည်။
NIRS သည်ယခင်က penile hemodynamics ကိုတိုင်းတာရန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့ပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်လူနာအတွက်ပိုမိုအဆင်ပြေလွယ်ကူသောအခြေအနေကိုပေးခဲ့သည်။6,7လိင်အင်္ဂါ၏ပင်စည်နှင့်အစွန်အဖျားနှင့်ဆက်နွယ်နေသောကွင်းများမှတစ်ဆင့် penile tumescence and rigidity ကိုတိုင်းတာပေးသောစီးပွားဖြစ်စက် RigiScan နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၊8,9ဘာသာရပ်အတွက်သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန် NIRS သည်ရိုးရိုးအရင်းအမြစ် -detector ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အတူ vasculogenic အချက်အလက်များကိုပေးနိုင်သည်။ အခြား pudendal angiography၊ duplex Doppler ultrasonography နှင့် cavernosometry အပါအ ၀ င် penile tumccence အတွင်းသွေးကြောတွင်ပါဝင်ခြင်းကိုအကဲဖြတ်ရန်အခြားနည်းလမ်းများကိုလည်းအသုံးပြုခဲ့သည်။10, 11 သို့သော်၎င်းတို့သည်စျေးကြီးသောကုန်ကျစရိတ်နှင့်နည်းစနစ်များရှုပ်ထွေးခြင်းတို့ကြောင့်ကန့်သတ်ထားသည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ NIRS ကိုလိင်မှုနှိုးဆွမှုလေ့လာခြင်းအတွက်လိင်အင်္ဂါစိုက်ခင်းစိုက်ထူမှုနှင့် ဦး နှောက်၏တုန့်ပြန်မှုအတွင်းတိုင်းတာခြင်းအားဖြင့်အမျိုးသားလိင်စိတ်နိုးထမှုကိုလေ့လာခြင်းအတွက်လက်တွေ့ကျသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သုတေသီများကလေ့လာမှုက NIRS ကို ED ရဲ့မှန်ကန်သောရောဂါလက္ခဏာကိုရှာဖွေရာမှာအသုံးချနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဤလေ့လာမှုကိုဂွမ်ဂျူသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာအင်စတီကျူးရှင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ (20140319-HR-10-01-02) ကပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအတည်ပြုခဲ့သည်။ လက်ျာလက်ကျန်းမာသန်စွမ်းအမျိုးသားများ (အသက် ၂၄ မှ ၃ နှစ်) သည်ဤလေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ကြသည်။ ဘာသာရပ်များကိုတက္ကသိုလ်ကြော်ငြာများမှစုဆောင်းခဲ့သည်။ ကြိုတင်စမ်းသပ်မှုမတိုင်မီရေးသားထားသောအသိပေးသဘောတူညီချက်ကိုဘာသာရပ်တစ်ခုစီမှရရှိခဲ့သည်။
ယခင်လေ့လာမှုတွင်ဖော်ပြထားသည့်အိမ်တွင်တည်ဆောက်ထားသော NIRS စနစ်6 အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွ (VSS) စဉ်အတွင်းနှောက်နှင့်လိင်တံ hemodynamics တိုင်းတာရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှု၏ပထမပိုင်းတွင်ဘာသာရပ် ၁၀ ခုရှိ pre-frontal cortex မှ hemodynamics သည်လိင်မှုနှိုးဆွမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအချက်ပြတိုင်းတာမှုပြောင်းလဲမှုတည်ရှိမှုကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်တိုင်းတာသည်။ ဒုတိယပိုင်းတွင်သွေးကြော ၅ ခုမှ pre- frontal cortex နှင့်လိင်အင်္ဂါနှစ်မျိုးလုံးတွင်တစ်မျိုးတည်းပြောင်းလဲခြင်းကိုလေ့လာခဲ့သည်။
NIRS တွင်အလင်းအရင်းအမြစ်နှင့် detector ပါဝင်ပြီး single-supply trans-impedance amplifier အားဖြင့်အလင်း detector (OPT101; Texas Instruments Inc, Dallas, TX) တွင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အလင်းအရင်းအမြစ်သည်လှိုင်းအလျား ၇၃၅ nm နှင့် ၈၅၀ nm ထုတ်လွှတ်ပေးသည့် diode (L735 / 850-735D850; Epitex Inc, Kyoto, Japan) ဖြစ်သည်။ အလင်းထုတ်လွှတ်သော diode အရင်းအမြစ်မှလှိုင်းအလျား ၂ ခုသည်တစ်သျှူးကိုတစ်သမတ်တည်းထွန်းလင်းစေပြီးထုတ်လွှတ်လိုက်သောအလင်းကို photodetectors များကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ယာယီ resolution 40 Hz ရရှိရန်အတွက်အချက်အလက်စုဆောင်းမှုသံသရာသည် ၀.၂၅ စက္ကန့်သာရှိသည်။
နဖူးနှင့်လိင်အင်္ဂါကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများကိုစစ်ဆေးမှုတွင်ပြထားပါသည် ပုံ 1တစ် ဦး က, ခအဆိုပါ ဦး ခေါင်းကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးအပေါ်ယံ hemodynamics နှင့်လည်း cortical ဒေသများအနေဖြင့် signal ကိုစောငျ့ရှောကျဖို့လုံလောက်တဲ့ထိုးဖောက်မှုအတိမ်အနက်ကိုထောက်ပံ့ပေးသော3စင်တီမီတာတစ်အရင်းအမြစ် - detector ခွဲခြာအကွာအဝေးရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ၀.၈ စင်တီမီတာတိုသောရုပ်ပုံကိုအပေါ်ယံအလွှာများအတွင်း hemodynamic ပြောင်းလဲမှုကိုရှာဖွေရန်အသုံးပြုခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ရေတိုချန်နယ်၏အချက်အလက်များကိုဝေဖန်မှုပြုလုပ်ရန်သီးခြားခွဲထုတ်ရန်ပိုရှည်သောလမ်းကြောင်းမှဖိအားပေးခဲ့သည်။ ဦး ခေါင်းစူးစမ်းမှုများကိုစမ်းသပ်သူများက တွဲဖက်၍ အဆင်မပြေမှုများမရှိဘဲစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကိုလုံလောက်စွာတပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုထားသောနှစ်ဖက်စလုံးကော် 0.8 × 20 disk များ (BioSemi Instrumentation, Amsterdam, Netherlands) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါ penile NIRS အာရုံခံကိရိယာဆေးဘက်ဆိုင်ရာတိပ်သုံးပြီးလိင်အင်္ဂါ၏ညာဘက် medial ခြမ်းမှဘာသာရပ်များသူတို့ကိုယ်သူတို့အားဖြင့်ကပ်ခဲ့သည်။ ဒီမတိုင်မီကဘာသာရပ်များကိုလိင်အင်္ဂါနှင့်စနစ်တကျမည်သို့ချည်နှောင်ရမည်ကိုညွှန်ကြားခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ၂ ခုအတွက်တည်ငြိမ်သောအချက်ပြမှုကိုအတည်ပြုပြီးနောက်စမ်းသပ်ပရိုတိုကောကိုသီးခြားအခန်းရှိစမ်းသပ်သူမှအဝေးမှထိန်းချုပ်သည်။ လိင်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများအတွက်စစ်ဆေးမှုကိုအရင်းအမြစ် -detector ခွဲထုတ်ခြင်းဖြင့် ၁ စင်တီမီတာခွဲခြားထားခြင်းဖြင့် corpus cavernosum မှ hemodynamic ပြောင်းလဲမှုများကိုစောင့်ကြည့်ရန်လုံလောက်သောထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်မှုကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။6
အနီး - အနီအောက်ရောင်ခြည်ရောင်စဉ်တန်းမှန်ဘီလူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတည်နေရာ - နဖူးပေါ်တွင် (A) နှင့်လိင်အင်္ဂါ (B). C, စမ်းသပ်ချက်များအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအချိန်။ SD = အကွာအဝေးတို။
အဆိုပါစမ်းသပ်ချက်များ၏ protocol ကိုများအတွက်သိထားပုံအတွက်ပြသနေသည် ပုံ 1C. ရွေ့လျားမှုအပိုပစ္စည်းအရေအတွက်ကိုလျှော့ချရန်အဆင်ပြေသောထိုင်ခုံတွင်မလှုပ်ဘဲထိုင်ရန်နှင့်မော်နီတာကိုအာရုံစိုက်ရန်ဘာသာရပ်များကိုသင်ကြားခဲ့သည်။ ၂ မတူညီသောဗွီဒီယိုကလစ်များကိုပြသထားသည့်အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်နှင့်အဖြူရောင်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပါရှိသည်။ ရိုးရှင်းသောအမြင်လှုံ့ဆော်မှုထက်လိင်စိတ်ကိုနှိုးဆွခြင်းမှ ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်အတွက် erotic episode (VSS) ပါသည့် video clips နှင့်သဘာဝပါ ၀ င်သည့် neutral video (neutral visual stimulation [NVS]) ကိုပြသခဲ့သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးစမ်းသပ်မှုမှာ VSS နှင့် NVS တို့၏အမိန့်သည်ဘာသာရပ် ၁၀ ခုအကြားအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုနှစ်ခုလုံးမှ hemodynamic တုန့်ပြန်မှုများကိုရှင်းလင်းစွာခွဲခြားရန်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယစမ်းသပ်မှုတွင် VSS ကို NVS မတိုင်မီပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါခေါ်ဆောင်သွားဗီဒီယိုတွင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့အကြားလိင်ဆက်ဆံခြင်းပါဝင်သည်။ အနားယူချိန်များအတွင်းနှလုံးခုန်နှုန်းကိုပုံမှန်အခြေအနေသို့ပြန်ရောက်နိုင်ရန်အတွက်အသက်ရှူခြင်းကိုအာရုံစိုက်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဗီဒီယိုများ၏ကြာချိန်နှင့်ဆက်နွှယ်မှုများကိုကြိုတင်ရင့်ကျက်သောနှိုးဆွမှုနှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်များကိုတားဆီးရန်ဘာသာရပ်များအားမသိရှိရသေးပါ။
အလင်း၏ပြင်းထန်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ခြင်းသည်အောက်စီဂျင်ဟိုက်မိုဂလိုဘင် (HbO) နှင့် deoxygenated ဟေမိုဂလိုဘင် (Hb) အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပြုပြင်ထားသောဘီဘာဘတ်နှင့်ပတ်သက်သောဥပဒေကိုပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းခြင်းနှင့်အသက်ရှူမှုဆိုင်ရာအချက်ပြမှုကို Butterworth အနိမ့် pass filter ကို ၀.၆ Hz ဖြင့် အသုံးပြု၍ NIRS ဒေတာမှဖယ်ထုတ်ခဲ့သည်။ အပေါ်ယံအလွှာမှ hemodynamic အပြောင်းအလဲများကိုတစ်ခုလုံးကိုတိုင်းတာခြင်းကျော်အကွာအဝေးစုံစမ်းစစ်ဆေးအချက်အလက်များမှတိုတောင်းသောအကွာအဝေးစုံစမ်းမှု signal ကိုချုံ့ခြင်းနှင့်နုတ်ခြင်းဖြင့်နဖူးချန်နယ်များမှဖိနှိပ်ခံခဲ့ရသည်။12 ဦး နှောက်နှင့်လိင်အင်္ဂါတွင် HbO နှင့် Hb အာရုံစူးစိုက်မှုအပြောင်းအလဲများကိုကွဲပြားသောအမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှု ၂ ခုအတွင်းနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။
ဦး နှောက် hemodynamics (N = 10) ကိုသာစောင့်ကြည့်ပထမ ဦး ဆုံးစမ်းသပ်မှုအတွက်ဘာသာရပ်များအားလုံးကိုလှုံ့ဆော်မှု၏အစနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုရဲ့အဆုံးမှာပျမ်းမျှ hemodynamic အပြောင်းအလဲများကိုမှာပြသနေသည် ပုံ 2။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ကို VSS နှင့် NVS အကြားတွေ့ရှိရသည်။P <.01, α = 0.01) ဒါပေမယ့်လက်ဝဲ hemisphere များအကြား (မP > .05)2အမြီးတွဲ Wilcoxon စမ်းသပ်သုံးပြီး။
အဆုံးနှင့်ဆွမှု၏အစအကြား ဦး နှောက် hemodynamics အတွက်ပျမ်းမျှအာရုံစူးစိုက်မှုပြောင်းလဲမှု (N = 10) ။ hemodynamics အတွက်သိသာထင်ရှားသောခြားနားချက် (SS) ကိုအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ (VSS) နှင့်ကြားနေအမြင်အာရုံဆွ (NVS) အကြားတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုစလုံးအတွက်ညာဘက်နှင့်ဘယ်ဘက်ခြမ်းများအကြားသိသိသာသာခြားနားမှုမတွေ့ရပါ။ DPF = differential ကိုလမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းအချက်။
တစ်ပြိုင်နက်တည်းတိုင်းတာမှုကာလအတွင်း pre-frontal cortex နှင့်လိင်အင်္ဂါအင်္ဂါတို့တွင်ပျမ်းမျှ hemodynamic တုန့်ပြန်မှု (N = 5) တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ပုံ 3။ တစ်ပြိုင်နက်တည်းတိုင်းတာခြင်းအတွက် ဦး နှောက် hemodynamics ၏ယာယီ profile များကိုယခင်လွတ်လပ်သောတိုင်းတာခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသည်မဟုတ်။ VSS ကာလအတွင်းကြိုတင်တိုကျရိုကျတုန့်ပြန်မှုသည် HbO သိသိသာသာမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်အခြေခံနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် pre-frontal cortex တွင် Hb လျော့နည်းမှုလျော့နည်းမှုကိုဖော်ပြသည်။ VSS ကာလအတွင်း ဦး နှောက် hemodynamics ပြောင်းလဲမှုသည်လိင်အင်္ဂါတွင် HbO နှင့် Hb နှစ်မျိုးလုံးတိုးများလာခြင်းနှင့်အတူအောင်မြင်သော penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောသွေးပမာဏတိုးလာခြင်းနှင့်အတူလိုက်ပါလာသည်။ အဆိုပါ penile တုံ့ပြန်မှုစတင်ခြင်း VSS စဉ်အတွင်း ဦး နှောက် hemodynamic ပြောင်းလဲမှုစတင်ခြင်းကနေ4± 1.5 စက္ကန့်အားဖြင့်နောက်ကျလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ VSS ပြီးဆုံးသွားသောအခါ ဦး နှောက်နှင့် penile hemodynamics သည်စုတ်ပြဲလာပြီး ဦး နှောက် HbO နှင့် Hb သည်အခြေခံပြည်နယ်ဆီသို့ ဦး တည်နေပြီးလိင်အင်္ဂါတွင်စုစုပေါင်းသွေးပမာဏလျော့ကျသွားသည်။ အဆိုပါ NVS ၏စတင်ခြင်းနှောက်နှင့် penile hemodynamics နှစ် ဦး စလုံးအတွက်အနည်းငယ်မျှသာတုံ့ပြန်မှုပြသထားတယ်။
တစ်ပြိုင်နက်တည်းတိုင်းတာခြင်း (N = 5) ကာလအတွင်းပျမ်းမျှ hemodynamic အပြောင်းအလဲများ (1- တဖက်သတ်အမှားအရက်ဆိုင် SD ကကိုယ်စားပြုသည်) ။ အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ (အနီရောင်ဒေသ) နှင့်ကြားနေအမြင်အာရုံ (အပြာဒေသ) ဆွ၏ကာလ။ DPF = differential ကိုလမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းအချက်; HbO = အောက်စီဂျင်ဟီမိုဂလိုဘင်; Hb = deoxygenated ဟေမိုဂလိုဘင်။
ဤလေ့လာမှုတွင် NIRS သည်လိင်မှုနှိုးဆွမှုကို ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်လိင်တံ၏တုန့်ပြန်မှုများကိုတစ်ပြိုင်တည်းတိုင်းတာရန်ကမ်းလှမ်းသည်။ ၎င်းသည်လိင်အင်္ဂါပျော့ခြင်းနှင့် ဦး နှောက်၏လုပ်ဆောင်မှုအခြေအနေသာမကလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုနှင့်ပတ်သက်သောသူတို့၏တုန့်ပြန်မှုများနှင့်လည်းဆက်စပ်နေသည်။ NIRS ကိုအသုံးပြုပြီး VSS နှင့်သက်ဆိုင်သော pre-front cortex တွင် hemodynamic အပြောင်းအလဲများကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ခဲ့သည်။ pre- တိုကျရိုကျ cortex အတွက် hemodynamic အပြောင်းအလဲများကို HbO အတွက်တိုးနှင့် HB အတွက်သက်ဆိုင်ရာကျဆင်းခြင်းအားဖြင့်ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။ ဤသည် hemodynamic ပုံစံအာရုံကြောသွေးကြောဆိုင်ရာနားချင်းဆက်မှီခြင်းဖြင့်ရှင်းပြနိုင်သည်ထို့ကြောင့် pre- တိုကျရိုကျ cortex VSS ကာလအတွင်း activated ခဲ့ညွှန်ပြအာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအတိုင်းအတာအဖြစ်ဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ကြားနေဗီဒီယိုကလစ်သည် VSS နှင့်ဆန့်ကျင်။ ဟီမိုဂလိုဗင်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုသိသိသာသာပြောင်းလဲမှုမဖြစ်စေခဲ့ပါ၊ ၎င်းသည်အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုထက်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုတုန့်ပြန်သည့်အနေဖြင့် pre-front cortex သည်လိင်မှုနှိုးဆွမှုကိုတုန့်ပြန်သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုက penile စိုက်ထူဖြစ်ပေါ်လာအောင်အတွက် Pre-frontal cortex ၏တိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်မှုမဆိုလိုပါ။ သို့သော် pre- တိုကျရိုကျ cortex လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများအပါအဝင်ပိုမိုမြင့်မားသိမြင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်လူသိများသည်13 နှင့်အဓိကစိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက် - activated အောက်မှာဖြစ်ပါတယ်14 စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ED ဖော်ထုတ်အတွက်ဒီထူးခြားတဲ့အင်္ဂါရပ်အောင်။
တစ်ပြိုင်နက်တည်းတိုင်းတာမှုများပြုလုပ်ရာတွင်သွေးပေါင်ချိန်တိုးခြင်းကြောင့် HbO နှင့် Hb နှစ်မျိုးလုံး၏အာရုံစူးစိုက်မှုနှုန်းမြင့်တက်လာခြင်းအားဖြင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအား penile တုန့်ပြန်မှုကိုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ လိင်မှုနှိုးဆွမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောစုစုပေါင်းသွေးပမာဏသိသိသာသာတိုးလာခြင်းသည်ကျန်းမာသော penile စိုက်ထူခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်သည်။ သွေးပမာဏပြောင်းလဲခြင်းသည်သွေးကြောဆိုင်ရာ ED ကိုညွှန်ပြနိုင်သည်။7 ဦး နှောက်နှင့်လိင်အင်္ဂါတို့တွင်တုံ့ပြန်မှုများနှောင့်နှေးခြင်းသည်ပုံမှန်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကို ဦး နှောက်တွင်ပထမဆုံးစတင်ခဲ့ခြင်းနှင့်လိင်အင်္ဂါတွင်အောင်မြင်စွာဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ တုံ့ပြန်မှုများအကြားအချိန်ကြာမြင့်စွာနှောင့်နှေးခြင်းသည်အချို့သောအာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါများကိုပြနိုင်သည်။15
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ရိုးရှင်းမှုသည်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေတွင်ဤနည်းစနစ်၏အနာဂတ်အကောင်အထည်ဖော်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကာသွေးကြောဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် NIRS ကို cortex တစ်ခုလုံးတိုင်းတာရန်အလွယ်တကူတိုးချဲ့နိုင်သည်။16 ဦး နှောက်လှုပ်ရှားမှုများကိုစစ်ဆေးရာတွင် NIRS ၏အဓိကအားနည်းချက်မှာ ဦး နှောက်၏အပေါ်ယံအလွှာများအတွင်းရှိစနစ်တကျသွေးကြောဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများကိုမြင့်မားစွာညစ်ညမ်းစေခြင်းဖြစ်သည်။ ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှုကိုရှာဖွေရန် NIRS ၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုလျှော့ချပေးသည်။ ဤပြissueနာကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်အရင်းအမြစ်နှင့်ရှာဖွေရေးကိရိယာအကြားအကွာအဝေးတိုသောအပိုဆောင်းချန်နယ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အများအားဖြင့်အပေါ်ယံအလွှာများမှ ဦး ရေပြား (ဦး ရေပြားနှင့် ဦး ခေါင်းခွံ) မှမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ အဆိုပါနည်းစနစ်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဇီဝကမ္မဆူညံသံကိုနှိမ်နင်းရန်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆက်နွှယ်သော cortical အချက်ပြများကိုထုတ်ယူရန်ခွင့်ပြုသည်။
ဤပဏာမလေ့လာမှုတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များအရ NIRS သည်စနစ်တစ်ခုကို အသုံးပြု၍ လိင်မှုနှိုးဆွစဉ်အတွင်း ဦး နှောက်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာသည်လိင်အင်္ဂါပြောင်းလဲခြင်းကိုအလွယ်တကူလေ့လာနိုင်ရန်အသုံးဝင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ED ၏ရောဂါကိုတိုးမြှင့်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ED ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအမျိုးမျိုးရှိသောလူနာများအပါအ ၀ င်ဘာသာရပ်များပိုမိုများပြားလာရန်လက်ရှိအလုပ်၏လူ ဦး ရေကိုတိုးချဲ့ရန်စီစဉ်ထားသည်။
Evgenii Kim; ဂျေဂွမ်ကင်မ်
Evgenii Kim; Sungchul Kim; ဇေဖနိ Phillips က V; Songhyun Lee
Evgenii Kim; Kwangsung Park၊ ဂျေဂွမ်ကင်မ်
Evgenii Kim; ဇေဖနိ Phillips က V; Eloise Anguluan
Evgenii Kim; Kwangsung ပန်းခြံ
Arnow, BA, Desmond, je, Banner, LL et al ။ ကျန်းမာ, လိင်ကွဲလိင်ယောက်ျားအတွက် ဦး နှောက်ကို activation နှင့်လိင်စိတ်နှိုးဆွ။ ဦး နှောက်။ ၂၀၀၂; 2002: 125-1014
Miyagawa, Y. , Tsujimura, အေ, Fujita, K. et al ။ ယောက်ျားများတွင် audiovisual လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲနဲ့: လိင်စိတ်နှိုးဆွစဉ်အတွင်း penile စိုက်ထူ၏စတင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏နှိုင်းယှဉ် positron ထုတ်လွှတ် tomography လေ့လာမှု။ Neuroimage ။ ၂၀၀၇; 2007: 36-830
Moulier, V. , Mouras, H. , Pélégrini-Issac, M. et al ။ လူ့ယောက်ျားအတွက်ဓာတ်ပုံပြပွဲလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့် evoked penile စိုက်ထူ၏ Neuroanatomical ဆက်စပ်မှု။ Neuroimage ။ ၂၀၀၆; 2006: 33-689
Boas, DA, Dale, AM နှင့် Franceschini, MA ဦး နှောက်ကိုသက်ဝင်စေခြင်း၏ပျံ့နှံ့သည့် optical ပုံရိပ် - ပုံရိပ် sensitivity, resolution နှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုအကောင်းဆုံးပြုလုပ်ရန်ချဉ်းကပ်သည်။ Neuroimage ။ 2004; 23: S275-S288
Jasdzewski, G. အ, Strangman, G. အ, Wagner, ဂျေ et al ။ အနီး - အနီအောက်ရောင်ခြည်အလင်းတန်းများအားဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်အပျက် -related မော်တာနှင့်အမြင်အာရုံပါရာဒိုင်းမှ hemodynamic တုံ့ပြန်မှုအတွက်ကွာခြားချက်များ။ Neuroimage ။ ၂၀၀၃; 2003: 20-479
ကင်မ်, အီး, Lee က, အက်စ်, Phillips က, Z. et al ။ အနီး - အနီအောက်ရောင်ခြည်အလင်းတန်းများအားဖြင့်လေ့လာတွေ့ရှိအမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆွစဉ်အတွင်း penile hemodynamics ၏တစ် ဦး ကကွာဟမှု။ BMC Urol ။ ၂၀၁၅; ၁၅: ၁၁
Burnett, အေ, Allen က, R. , Davis က, et et al ။ vasculogenic erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရောဂါအဘို့အနီအောက်ရောင်ခြည် spectrophotometry ။ Int J Impot Res ။ ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ ၁၂: ၂၄၇
Elhanbly, အက်စ်နှင့် Elkholy, အေ Nocturnal penile စိုက်ထူ: သွေးကြော erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ရောဂါအတွက် RigiScan ၏အခန်းကဏ္.ကို။ J Sex Med ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ 2012: 9-3219
Mohr, DC Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု: ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့်ကုသမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုပြန်လည်သုံးသပ်။ Clin Psychol ဗျာ 1990; 10: 123-150
Meuleman, EJ, Hatzichristou,,, Rosen, RC et al ။ ပြန်လည်လည်ပတ်အထီး erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက် Diagnostic စမ်းသပ်မှု။ J Sex Med ။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်၊ 2010: 7-2375
Wespes, အီး, Delcour, C တို့, Struyven, ဂျေ et al ။ Cavernometry-cavernography: အော်ဂဲနစ်ခွန်အားမရှိခြင်းတွင်၎င်း၏အခန်းကဏ္။ ။ Eur Urol ။ ၁၉၈၄; 1984: 10-229
Saager, RB နှင့် Berger, AJ တိုက်ရိုက်သွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်အလွှာနှစ်ခုမှိန်သောမီဒီယာတွင် ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုပုံစံများကိုဖယ်ရှားခြင်း။ J ကို Opt Soc Am တစ် ဦး က Opt Image Sci Vis ။ ၂၀၀၅; 2005: 22-1874
Spinella, M. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် prefrontal စနစ်များ၏အခန်းကဏ္။ ။ Int J ကို Neurosci ။ ၂၀၀၇; 2007: 117-369
Koenigs, အမ်နှင့် Grafman, စိတ်ကျရောဂါ၏ဂျေအဆိုပါအလုပ်လုပ်တဲ့ neuroanatomy: ventromedial နှင့် dorsolateral prefrontal cortex များအတွက်ကွဲပြားအခန်းကဏ္။ ။ Behav ဦး နှောက် Res ။ 2009; 201: 239-243
Thompson က, P. , ဒစ်ခ်, ဂျေ, Asselman, P. et al ။ အဆိုပါမော်တာ cortex ၏ဆွအားဖြင့်ကျောရိုးကိုတွေ့ရှိရပါသည်အတွက်မော်တာ function ကို၏စာမေးပွဲ။ Ann Neurol 1987; 21: 389-396
Ferrari, M. နှင့် Quaresima, V. လူ့လုပ်ငန်းဆောင်တာများအနီးရှိအနီအောက်ရောင်ခြည်အလင်းတန်းများ (fNIRS) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အသုံးချမှုနယ်ပယ်များ၏သမိုင်းအကျဉ်းချုပ်သုံးသပ်ချက်။ Neuroimage ။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ 2012: 63-921
| Scopus (544)